ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ရှိသုံးစွဲသူများ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှု | Martech Zone
သက်ဆိုင်ရာဖောက်သည်များ၏တုန့်ပြန်ချက်ကိုရယူခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာရယူခြင်းသည်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ သေချာတာပေါ့၊ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းသည်ခက်ခဲသည်၊ သုတေသနပြုလုပ်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများကဘယ်တော့မှကတိမထားဘူး။ ခံစား စီးပွားရေးအတွက်ခြားနားချက်ကိုလုပ်ဖို့ရှည်လျားလွန်း။ သို့သော်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်စီးပွားရေး ဦး တည်ချက်အားမှန်ကန်ကြောင်းပြသရန်လိုအပ်သည့်ဖောက်သည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။
ပိုမိုမြန်ဆန်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောဖောက်သည်များ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖန်တီးရန်ခေတ်မီနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြေရှင်းနည်းများသည်စမတ်ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအသစ်များကို Research-as-a-Service (RaaS) ဖြေရှင်းနည်းများဟုခေါ်ကြသည်။ အကောင်းဆုံး RaaS ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးသုတေသနအတွက်ဖန်တီးသည့်ရိုးရာနည်းလမ်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အာရုံစိုက်သည်။ RaaS ၏ဖြေရှင်းနည်းများသည်သုတေသီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာများ၊ ဒီဇိုင်နာများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားအရေးအကြီးဆုံးသောအရာများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်အားပေးခြင်း၊ ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများကိုနားထောင်ခြင်းနှင့် UX နှင့်ထုတ်ကုန်လမ်းပြမြေပုံများတွင်လူ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေါင်းစပ်ခြင်း။
မာ့ခ်အန်ဒရီဆန်က“ ဆော့ဖ်ဝဲသည်ကမ္ဘာကိုစားနေသည်။ ” ထို့အပြင်ထုတ်ကုန်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကိရိယာများနှင့်အချိန်ဇယားတို့ထက်သာလွန်သောဥပမာမရှိပါ။ Lean-Agile ခေတ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်အချက်အလက်အခြေပြုထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပေါက်ကွဲစေပြီးထုတ်ကုန်များကိုကုဒ်၊ ဒီဇိုင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Big Data နှင့် Artificial Intelligence ကအရည်အသွေးသုတေသနကိုခေတ်မမီတော့ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုကတိတော်များသည်ပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးဘဲလူ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အချိန်ဇယားနှင့်ကိရိယာများသည်ခေတ်မီကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအဆင့်မမီတော့ပါ။ မကြာသေးမီအချိန်အထိအရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသနကိုလွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်နည်းတူရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤသည်မှာလက်တွေ့မကျတော့သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
R&D ၏အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ဖောက်သည်များ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလျင်၊ စျေးကွက်သို့အမြန်နှုန်းကိုပျက်စီးစေသည်
ကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုရယူရန်လိုအပ်သည် လောက်နီးပါး မရေတွက်ပါဘူး
အရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသနတွင်သမိုင်းကြောင်းအရမွေးဖွားသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်ခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ RaaS ၏ဖြေရှင်းချက်သည်သုတေသီများအားအရေးအကြီးဆုံးသောအချက်များကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်အားပေးသည်။ သူတို့၏သုတေသနကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ခြားနားမှုကိုဖြစ်စေသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သတင်းကောင်းမှာအရည်အသွေးရှိသောသုတေသနနည်းပညာအသစ်များကိုလက်ခံခြင်းသည်အသစ်သောခေတ်မှီသောဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောကုမ္ပဏီများသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးသုတေသနကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖန်တီးရန်နှင့်ထိုးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်နည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်ကဒီမှာပါ၊ ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ Samsung, LG, Verizon, Machine Zone နှင့် Hyundai မှထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများနှင့်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ - သူတို့ရဲ့ဒုတိယနှစ် RaaSs tools တွေကိုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြောင်းလဲရန်၊ ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်များ။ RaaS ၏ဖြေရှင်းချက်များသည်ယခုအခါကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြီးထွားမှုအစုအဝေး၏ဇယားကွက်၏အခြားအကွက်ဖြစ်သည်။
methinks သည်သုတေသနကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်
ဆီလီကွန်ဗယ်လီအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ မင် အနာဂတ်၏အရည်အသွေးသုတေသနဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်း - ပထမဆုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်သင့်အားအတည်ပြုပြီးသောစားသုံးသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောရန်လိုသောပရိုဖိုင်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သင်ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှခုနစ်ပုံတစ်ပုံကိုချက်ချင်းနားလည်နိုင်သည်။
methinks သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစျေးကွက်သို့ပို့ဆောင်ရာတွင်ဖောက်သည်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုအချိန်မီ၊ အကျိုးရှိစွာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်လုပ်ငန်းခွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဒေါ်လာပေါင်းထရီလီယံပေါင်းများစွာ R&D စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အချိန်နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည်စားသုံးသူများ၏အမြင်များကိုရရှိရန်အဟန့်အတားဖြစ်နေသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အရည်အသွေးရှိသောသုတေသနပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအကြိမ်ရေသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုတိုးမြှင့ ်၍ ပြောင်းလဲသင့်သည်။
အဆိုပါ methinks ကွာခြားချက်
methinks သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမဆိုကူညီရန်၊ ဖောက်သည်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အလားအလာများကိုရှာဖွေပြီးအင်တာဗျူးပေးသည်။ ဤသည်မှာဖမ်းမိသောအရည်အသွေးရှိသောသုတေသနသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဖောက်သည်များထံမှအကျိုးရှိပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဆိုမှုများမှတစ်ဆင့်လေ့လာခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ကူးရေးခြင်း၊ မှတ်စုတင်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူတည်းဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ RaaS-based ပလက်ဖောင်းသည်သုတေသီများအားတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးများ၊ အရည်အသွေးစစ်တမ်းများနှင့် longitudinal လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးအခြေခံထုတ်ကုန်အသုံးအဆောင်အသုံးအများဆုံးမှရေရှည်သုတေသနကြိုးပမ်းမှုများမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာနားလည်မှုအထိဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက်၊ ဂိမ်း၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်မီဒီယာတို့တွင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအားနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးများသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။ မကြာသေးမီက US အာရုံစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အထူးသဖြင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်များရှိသူများသည် methinks ကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုတေသီများ၊ ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာများ၊ ဒီဇိုင်နာများသို့မဟုတ် R&D ခေါင်းဆောင်များအားသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ဖောက်သည်များ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာထိုးသွင်းနိုင်ရန်အားပေးသောစျေးကွက်သုတေသနကို methinks ကပြောင်းလဲလိုသည်။ အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုအချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ မှတ်စုများယူခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်းတို့အတွက်ဗွီဒီယိုများအားလုံးသည်အချိန်တံဆိပ်ခတ်ထားပြီး Cloud တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
methinks ၏အဓိကကွာခြားချက်မှာကြိုတင်ပြသထားသည့်အုပ်စုလိုက်ပါဝင်သူများဖြစ်သည်။ နီးပါး 400,000 Pre- ပြနှင့်အတူ စဉ်းစား အဓိကအားဖြင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဖောက်သည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည် ၀ ယ်လိုအားကိုရနိုင်သည်။ တန်ဖိုးရှိသောထင်မြင်ချက်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုပေးရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ methinks သည်သုတေသနပြုသူများအား၎င်းတို့၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန်သင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အသစ်စက်စက်ကုမ္ပဏီများမှသည်နှစ်ပေါင်းရာချီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထိဖောက်သည်များလိုချင်သည့်အရာနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်းသည်အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ methinks သည်အချိန်ဇယားနှင့်သုတေသန၏ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏ရည်မှန်းထားသောဖောက်သည်များနှင့်သင်နှင့်အရေးကြီးသောမေးခွန်းများမေးရန်နှင့်သင်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်မာသောပလက်ဖောင်းတစ်ခု၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်စဉ်းစားသူများ၏တက်ကြွသောစျေးကွက်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အလွန်စိန်ခေါ်မှုရှိသောပြaနာအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းသော၊ ကြော့ရှင်းသောအဖြေတစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။
Philip Yun, methinks တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ်
methinks ကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၈၉ မှစတင်သည်။ methinks သည် pay-as-you-go မော်ဒယ်တစ်ခုကိုပေးထားသည်၊ ထို့ကြောင့်သုတေသီများသည်သုတေသနလိုအပ်ချက်များပြောင်းလဲနိုင်သဖြင့်မဏ္orိုင်သို့မဟုတ်တိုးချဲ့နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သုတေသီများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးပလက်ဖောင်းအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုထပ်မံလျှော့ချနိုင်သည်။ အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိဖောက်သည်များ - သို့မဟုတ်စီမံကိန်းကိုအခြေခံသည့်သုတေသနလိုအပ်သောဖောက်သည်များ - သည် methink ၏ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအစုံအလင်ကိုကျွမ်းကျင်သည့်ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်: မင်္ဂလာပါ
White Paper: သုတေသနအားလုံးသည်တူညီသည်မဟုတ်ပါ
methink မှအဖွဲ့သည်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ဖောက်သည်များ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုခေါင်းစဉ်ကိုကိုင်တွယ်လိုကြသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်အဖြူကိုဖန်တီးခဲ့သည် အားလုံးသုတေသနသည်တူညီသောဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပါ.
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူပါ၊ ဖတ်ပါ၊ အကယ်၍ သင် RaaS ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုရန်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ပါသည် သရုပ်ပြတစ်ခုပေးပါ or အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်ပါ.
Tags: ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမာ့ခ် Andreesenထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုအရည်အသွေးသုတေသနဖြေရှင်းချက်အရည်အသွေးစစ်တမ်းများr & dသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်းစား